यी ५ स्वास्थ्य सम’स्यालाई पुरुषले कहिल्यै वेवास्ता गर्नुहुन्न, हुन सक्छन् ख’तरनाक ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/यी ५ स्वास्थ्य सम’स्यालाई पुरुषले कहिल्यै वेवास्ता गर्नुहुन्न, हुन सक्छन् ख’तरनाक !
काठमाडौं, १९ साउन । कतियय अवस्थामा जब हामी ओछ्यानबाट उठ्छौं त्यतिखेर हाम्रो शरीरको तापक्रम अचानक बढ्ने वा शरीरको कुनै भागमा सामान्य भन्दा धेरै नै दु’खाई हुने गर्छ ।हामी यस्तो सम’स्यालाई सामान्य भन्दै ध्यान नदिने गर्छौं । तर, यस्ता स’मस्याहरु लगातार लामो समयसम्म भईराख्यो भने हाम्रो स्वास्थ्यमा ग’म्भीर प्रकारको स’मस्या हुन सक्छ । आधुनिक जीवनशैलीले हामीलाई अनेक प्रकारका सुविधाहरुको साथसाथै विभिन्न प्रकारका रो’गहरु पनि उपहार दिएको छ । त्यसकारण विभिन्न नाम गरेका स्वास्थ्य सम’स्याहरुले हामीलाई दैनिक रुपमा सताउने गर्दछ ।
यस्ता सम’स्याहरु केही अस्थायी हुन्छन् भने केही लामो समयसम्म प्रभाव पारिरहने प्रकृतिका हुन्छन् । हामी विशेष गरी अस्थायी सम’स्याहरुलाई सामान्य प्रकारको स’स्या भन्दै धेरै ध्यान दिँदैनौं । हामी सोच्छौं यस्तो समस्या त अघिल्लो महिना पनि भएको थियो केही दिनमा आँफै ठिक हुन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा हामीले साना कुराहरुलाई नजरअन्दाज गर्दा हामीमा गम्भीर प्रकारको समस्या पनि हुने गर्छ । त्यसकारण सानो वा ठुलो जस्तोसुकै स्वास्थ्य सम’स्याहरु भए पनि जतिसक्दो छिटो स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।
यस्ता प्रकारका सम’स्याहरु शारीरिक थकानको कारण पनि हुनसक्छ ।
यी ५ समस्या’लाई कहिल्यै बेवास्ता गर्नुहुन्न
१. अचानक टाउको दु’ख्नु
अफिसमा काम गर्दै गर्दा, विहानको समयमा वा जुनसुकै समयमा अचानक टाउको दु’ख्ने गर्छ भने यस्तो सम’स्यालाई सामान्य सम’स्या मान्नु हुँदैन् ।
यस्तो सम’स्यामा हाम्रो शरीरको कुनै एक भाग अचानक दु’ख्ने र केही मिनेटमा यस्तो सम’स्या ठिक हुने गर्छ । ठिक भएपछि हामी यस सम’स्यालाई ध्यान दिँदैनौं ।
तर, ठिक भएपनि यस्तो समस्या’को बारेमा डाक्टरसंग परामर्श गर्नुपर्छ । यो सम’स्या माईग्रेसन वा आँखामा कुनै प्रकारको सम’स्याको लक्षण पनि हुन सक्छ ।
२. छाती दु’ख्नु
कतिपय अवस्थामा मानिसहरु छाती दु’खाईको सम’स्यालाई ठुलो सम’स्याको रुपमा लिँदैनन् र नजरअन्दाज गर्छन् । तर, यस्ता सम’स्याको कारण छातीमा द’बाब हुने, श्वासप्रश्वासमा सम’स्याको साथै हर्ट’अट्या’कको कारण समेत हुने गर्छ । यस्तो सम’स्याको कारण मुटुमा पर्याप्त मात्रामा रक्तसञ्चार समेत नहुने सम’स्या हुने गर्छ ।
३. अचानक तौल घट्नु
शरीरको तौल अचानक घ’ट्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो होइन । यदिले तपाईं शरीरको तौल घ’टाउने कुनै कोशिश गर्नुभएको छैन् तर, तपाईंको शरीरको तौल अचानक ५ प्रतिशत भन्दा धेरै घ’ट्छ भने यस्तो अवस्थामा क्या’न्सर लाग्न सक्ने सम्भावना धेरै मात्रामा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार काम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
४. तिव्र रुपमा वा लामो सम’यसम्म ज्व’रो आउनु
जो कोही मानिसलाई लामो समयसम्म १०३ डिग्री भन्दा धेरै ज्वरो आइरहन्छ भने यो गम्भीर प्रकारको समस्या हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा मानिसहरुलाई मुत्राशय सम्बन्धी सम’स्याहरु, निमोनिया साथै मस्तिष्कको सम’स्या भएको पनि हुन सक्छ ।
लगातार लामो समयसम्म ज्व’रो आइरहनु कुनै ठुलो स्वास्थ्य सम’स्याको लक्षण हुनसक्छ । त्यसकारण यस्तो भएमा तत्कालै स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्छ ।
५. श्वास फुल्नु
श्वास फुल्नु वा अचानक छोटो सास आउनु फोक्सो सम्बन्धी सम’स्याको कारण पनि हुनसक्छ । सिँढी चढ्दा श्वासप्रश्वासमा सम’स्या हुनु, छिटो थकाई लाग्नु जस्ता सामान्यलाई समस्या मान्नु हुँदैन् ।
यो मुटुको धड्कन अ’नियमित हुनुको लक्षण पनि हुन सक्छ । यो सम’स्याको कारण हर्ट अट्याक वा अन्य मुटुसम्बन्धि सम’स्याको खतरा बढ्ने गर्छ त्यसैले बेलैमा चिकित्सकसँग जाँच गराइहाल्नुपर्छ । (एजेन्सी)
यसलाई आधा घण्टासम्म कपालमा लगाएर शेम्पु लगाएर नुहानुहोस् । प्याजको रसबाट बनेको हेयरप्याकको प्रयोगले सजिलै कपाल लामो र चमकदार बनाउछ । साथै, कपाल झर्ने समस्या पनि कम हुन्छ । तर, याद गर्नुहोस् एकपटकमा एउटा उपाय मात्र प्रयोग गर्नुहोस्
साम्राज्ञीसँग किन आक्रोशित भए भूवन केसी ?